Labo kun oo caruur ah oo waalidkood laga qaaday | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Labo kun oo caruur ah oo waalidkood laga qaaday
Labo kun oo caruur ah oo waalidkood laga qaaday
Waalidiinta ayaa lagu soo oogay fal dacwad dambiyeed ah, halka carruurta la geynayo goobo lagu xanaaneeyo inta arrintooda la xalinayo.
Arrintan oo buuq weyn ka dhalisay Maraykanka ayaa waxaa ka hadashay Qaramada Midoobay oo dowladda dalkaas ugu baaqday in aysan kala soocin waalidka iyo caruurta wada socda.
Siyaasadan ayaa si weyn loo dhaliilay, iyada oo dimoqaraadiyiinta ay ku tilmaameen hirgalinteeda waxashnimo , waxaana qaar ka mid ah xisbiga republicanka ay ku baaqeen in si degdeg ah loo soo afjaro hirgalinta siyaasadan.
Inta bada caruurta ayaa hoy laga siiyay gobolka Texas, si dhaqsa ah ayuuna u buux samay hoygaasi.
Magaalo cusub oo loogu magacdaray hoygooda ayaa laga dhisayaa xadka Texas uu la leeyhaya Mexico taasi oo u dhaw magaalada Elpaso.
Ugu yaraan 300 oo caruuur ah ayaa la filayaa in la dejiyo guryahaasi maalmaha soo socda.
Madaxweyne Trump oo kula hadlayay aqalka cad weriyayaasha ayaa sheegay inuu kasoo horjeedo siyaasda kala fogeynta caruurta iyo waalidkooda, waxa uuna ku eedeeyay dadka kasoo horjeeda inay diidan yihiin isbadelka lagu sameyanyo sharciga socdaalka.